serasera medikaly no tsy nitsahatra nahatsikaretana lesoka ny serasera mikasika ny tambavy Covid organics izay nambaran’ny filoham-pirenena moa fa vokatra hitan’ireo mpikaroka malagasy hisorohana sy hitsaboana ny COVID 19. Mety azo ekena ihany ny hoe tsiambaratelo medikaly ny tsy fampahafantarana ny Kasinga hafa mameno azy io saingy tara kosa ny fampahafantarana ireo mety ho fiantraikany ara-pahasalamana ho an’ireo tsy tokony hisotro azy. Isan’ny nambara ho tsy tokony hisotro izany, ohatra, ny bevohoka, ny marary voa, ny diabetika kanefa dia nahagaga indray ny naheno ny filoham-pirenena nilaza ny alahady teo fa nisy ny fikasana hanome ity CVO ity ilay olona iray nodimandry saingy tara loatra. Nahagaga koa ny fanamarihan’ny filoha fa tsy nisotro CVO ireo narary. Fa angaha moa mahazo misotro daholo indray? Zakan’ny fahefa-mividin’ny rehetra koa ve ilay vidiny 1500 ariary raha toa ka ireny niaraha-nahita ireny ny filaharany fanampiana isan-karazany ao anatin’izao krizy izao? Efa tapitra voatety nizarana azy io ve ny fokontany rehetra manerana ny nosy? Mety nisy nisotro koa tao fa tsy ampy daozy, ohatra, satria raha 1500 ariary ny 33cl, ny zaza sy ankizy misotro 33cl isaky ny 2 andro ao anatin’ny herinandro ary ny lehibe 66cl ao anatin’izay tetiandro izay ihany koa. Ho avy ny ririnina, mety ho maro ny vehivavy bevohoka. Misy olona voan’ny diabeta koa, ohatra, fa tsy mahafantatra hoe voan’izany. Mba efa voadinika daholo ve ny momba izany rehetra izany?